ကျန်းမာရေး – Nyang Media
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှာ ဆေးတွေ တစ်ပုံကြီးသောက်ခိုင်းနေကြတယ် နဲ့ ကိုဗစ်သတင်းအမှားများ
Fact Checkစက်တင်ဘာ 27, 2020
ကိုဗစ်ရောဂါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သတင်းအချက်အလက် အမှား တွေ၊ လူတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ အယူအဆတွေ၊ တရားဝင် သုတေသနပြုမှုမပါတဲ့ အချက်အလက်များစွာဟာ ဖေ့စ်ဘွတ် လူမှုကွန်ရက်မှာ အများအပြားပျံ့နှံ့နေပါတယ်။ သည်လို သတင်းအချက်အလက်အမှားတွေ၊ အယူအဆတွေ၊ အချက်အလက် တွေဟာ ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုတွေ ရှိနိုင်သလဲဆိုတဲ့...
Fact Checkဇွန် 24, 2020
ကမ္ဘာ တစ်ဝန်းတွင် ကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်ခံရသူ ကိုးသန်း နီးပါးရှိပြီး သေဆုံးသူ လေးသိန်း ခုနှစ်သောင်းနီးပါး ရှိပြီဖြစ် ... ငြမ်း ရန်ကုန်မြို့လယ်၊ဆူးလေ ခုံးတံတားအနီးတွင် တွေ့ရသည့် ကိုဗစ်ရောဂါကာကွယ်ရေးသတိပေး နံရံကပ် ပိုစတာ၊မိုးခိုနေသူများနှင့် လိုရာခရီးသွားလာနေသူများ။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကိုဗစ်ရောဂါပိုးကို...
Fact Checkမေ 30, 2020
ဝန်ကြီးဆီကို တင်ပြပေးပါဆိုလို့ ဝန်ကြီးဆီကို ပို့လိုက်တယ်။ ဆေးထုတ်မယ့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်ပေါ့။ လုပ်ငန်းအစီအစဉ် ပို့ပေးလိုက်တော့ ဝန်ကြီးက ... UAM / ဒေါက်တာအောင်မြင့် COVID -19 ကာကွယ်ဆေးကို မြန်မာပြည်က ဆရာဝန်တစ်ဦးက ထုတ်လုပ်ရန်ကြိုးစားနေသည် ဆိုသည့်သတင်း...
Fact Checkမေ 28, 2020
လူစုလူဝေးကြီးတွေ နေ့တိုင်းလိုလိုဖြစ်နေမယ့်အခြေအနေဆိုတော့ စိတ်ပူစရာကောင်းတယ်။ အခု လူနာ ရာဂဏန်းဆိုတာကနေ ထောင်ဂဏန်းထိဖြစ်သွားမလား ... COVID - 19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှု ကာကွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်ရေး ဂရုတစိုက်ဆောင်ရွက်နေရချိန် ကျောင်းဖွင့်ရာသီနီးကပ်လာသဖြင့် ကျောင်း ပြန်ဖွင့်မည့်ရက် အသီးသီးကို ထုတ်ပြန် ကြေညာခဲ့သည်။...
ပြည်သူများအား အရည်အသွေးပြည့်ဝသည့် ကုသရေး ပေးနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်မည်ဟုဆို
Fact Checkမေ 09, 2020
MPHS / ကျန်မားရေးဆိုင်ရာ အသိပညာပေးမျှဝေမှုများ ပြုလုပ်နေသည် သူနာပြုတစ်ဦး ပြည်သူများအား အရည်အသွေးပြည့်ဝသည့် ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများပေးနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု ကျန်းမာရေးနှင့် အာကစားဝန်ကြီးဌာနက ယနေ့သတင်းထုတ်ပြန်သည်။ ကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်မှုများပေးနိုင်ရန်အတွက် ကုသရေးနှင့် ဆေးရုံလုပ်ငန်းများ ပိုမိုတိုးတက်ထိရောက် ကောင်းမွန် လာရန်...
အကြိမ်ကြိမ်ပြုပါ ၊ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပြုပါ
Fact Checkဧပြီ 30, 2020
တိတ်ဆိတ်ခြောက်ခြားဖွယ် ကောင်းသည့် မြို့ကြီး ဆိုလျင်ပင် မေတ္တာတရား များ စီးဆင်းနေသည့် အလျင်က လူသားဘဝများကို လုံခြုံစေ လိမ့်မည်။ ရဲစေလိမ့်မည် ... ပွဲတော်ကာလကြီးမှာ အသံချဲ့စက်တွေက ဘတပြန် ကျားတပြန် အပြိုင်အဆိုင် အားကောင်း ခဲ့သလောက်...
ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုများ ပိုလုပ်လျှင် လုပ်သလို ရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူ များပြားလာနိုင်
Fact Checkဧပြီ 26, 2020
ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်မှု လုပ်ငန်းများကို ရောဂါကူးစက်ဖြစ်ပွားနေသည့် မြို့နယ်များတွင် ဦးစားပေးအားထည့်၍ ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ် ... COVID -19 ရောဂါ ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုများ ပိုမို ပြုလုပ်လျင် ပြုလုပ်သလို ရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူ ပို များလာနိုင်သည် ဟု ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီး...
Fact Checkဧပြီ 16, 2020